Mepee akwụkwọ Office n'efu na Onye Nlele Okwu | Akụkọ akụrụngwa
Nlele Okwu: ngwa oru Microsoft maka igu na ibiputa akwukwo ndi Office
N'agbanyeghị na enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọzọ mgbe ọ bịara gụọ akwụkwọ Office, nke a nwere ike ịnọchite anya inwe wụnye ngwa ndị ọzọ na kọmputa anyị Windows. Ọ bụrụ na anyị ga-arụ ọrụ a, kedụ ụzọ kacha mma iji jiri ngwa ọrụ Microsoft chọrọ, nke bụ Okwu Onye Nlele.
Okwu Onye Nlele bụ obere ngwá ọrụ ị nwere ike iwunye na ụdị Windows ọ bụla ma si otú a, gbanwee kọmputa gị (n'agbanyeghị afọ ole ọ dị) ka ọ bụrụ obere akwụkwọ Office Office. N'ihi ntakịrị ego nke ngwa a na-erepịa, anyị nwere ike gbalịsie ike iji kọmputa ndị ọzọ anyị na-atụfu, ebe Okwu Viewer anaghị achọ nnukwu ohere na diski ike gị, ma ọ bụ na ọ chọrọ nnukwu RAM ma ọ bụ ihe dị iche akwa ihuenyo mkpebi. nnukwu.
Kedu ihe m ga - eji Onye Nlele Okwu n’ime Windows?
Ihe mbụ ikwuru bụ na Okwu Viewer bụ naanị obere onye nkiri dika akowara ya na aha ngwa oru a. Site na nke a anyị na-ekwu na n'ọnọdụ ọ bụla anyị agaghị enwe ike idezi akwụkwọ Office mana kama, ịrara onwe anyị nye ọrụ nke nyochaa ọdịnaya nke otu n'ime ha. Anyị na-akwado ka ị gaa na ebe nrụọrụ weebụ budata maka ngwa ọrụ a site na saịtị Microsoft gọọmentị, ebe naanị gị ga-aga kọwaa asụsụ ị chọrọ ịrụ ọrụ na ya interface.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-awụlikwa elu na windo nchọgharị Internetntanetị ọhụrụ, ebe onye ọrụ ga-atụ aro budata ụfọdụ plugins ndị ọzọ. Ọzọ anyị ga-edebe obere onyonyo ya, ebe (n'akụkụ nke anyị) anyị ahọpụtaghị msn ma ọ bụ Bing dị ka ihu ụlọ na igwe nchọta ndabara maka ihe nchọgharị Internetntanetị anyị.
Ndị ọzọ ọzọ nhọrọ nwere ike na-atụ aro na mwekota nke ndị na-ekiri maka PowerPoint ma ọ bụ Excel yana nbudata ngwaọrụ ọkachamara ole na ole iji dezie faịlụ Office ndị a. Ọ bụrụ n’ịchọghị inwe nke ọ bụla n’ime ngwa ndị a, ị ga-ekpughere igbe ha wee họrọ bọtịnụ na-acha anụnụ anụnụ nke dị n’akụkụ aka nri.
Mgbe Okwu Onye Nlele kwusịrị na usoro ntinye ya, ị ga-agba ya, oge ị ga-ahụ a kpam kpam dị ọcha na enyi na enyi interface n'otu oge. N'elu interface ya bụ ogwe ngwaọrụ, nke ga - enyere anyị aka ibubata akwụkwọ Office anyị chọrọ ịkwaga na Onye Nlele Okwu.
Mgbe anyị mere ya na bọtịnụ "Njikwa" na Okwu Nlele Okwu, windo nyocha faịlụ ga-emepe na-akpaghị aka. N'akụkụ aka ekpe ga-anọ Ogwe nhọrọ, nke ga - enyere anyị aka:
Mepee akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya.
Chọọ na desktọọpụ Windows.
Chọọ akwụkwọ m.
Chọta ụfọdụ faịlụ na kọmputa m.
Chọta faịlụ na netwọkụ mpaghara anyị.
Naanị ị ga-anwa ịchọta ebe otu faịlụ Office dị, nke a nwere ike ịbụ otu n'ime ya Okwu, PowerPoint ma ọ bụ Excel tumadi. Otu ntakịrị aghụghọ anyị na-akwado ka ị gbakwunye bụ na ị gbalịrị ịchọta akwụkwọ ị kwadoro na igwe ojii.
Ọ bụrụ na ejikọrọ kọmputa gị na nke ọ bụla (OneDrive, Drive, DropBox) naanị ịnwa ịchọta folda ahụ ejikọtara ya na igwe ojii na ọrụ ndị a. Iji mee nke a, ị ga-:
Họrọ n'aka ekpe gaa nhọrọ «Desktop".
Chọta folda aha njirimara gị n'akụkụ aka nri (na nke anyị, Rodrigo Iván Pacheco).
Pịa na folda ahụ ugboro abụọ.
Ozugbo i mechara usoro atọ a, ị ga - enwe ike ịchọta ndị ahụ niile nchekwa nke ị nwere ike ịmekọrịta na otu n'ime ọrụ igwe ojii; Na nseta ihuenyo nke anyị debere n'elu, egosiri OneDrive na iCloud, ma ole na ole ndị ọzọ nwere ike ịpụta, n'ihi na nke a ga-adabere na ma ị na-eji ha yana n'ụzọ doro anya, ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta ha na nzere dị iche iche.
Akụkụ na-adọrọ mmasị nke ahụ Okwu onye nlele na-enye anyị nke a na ọnọdụ ọgụgụ, Ọfọn, mgbe ị mepere akwụkwọ Okwu (inye obere ihe atụ ya), na nhọrọ "Lee" nke ogwe ngwaọrụ enwere ike ịhọrọ echiche dị iche, otu n'ime ha bụ onye na-eme ka ihe nwere akwụkwọ elektrọnik na kọmpụta anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Nlele Okwu: ngwa oru Microsoft maka igu na ibiputa akwukwo ndi Office
Peyotes nke Nnukwu Ohi Nchekwa onwe Ise na otu map
Eresị ndị na-eme ka ahụ ike maka ndị ọrịa Parkin rere